अटोबाट ओर्लने क्रममा मोटरसाइकलले ठक्कर दिदाँ सधैको लागि बिदा भइन् अदिति!! – Namaste Host
February 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on अटोबाट ओर्लने क्रममा मोटरसाइकलले ठक्कर दिदाँ सधैको लागि बिदा भइन् अदिति!!
अटोबाट ओर्लने क्रममा मोटरसाइकलले अदितीलाई ठक्कर दिएको थियो। उनकी आमा विपिशा ओझाका अनुसार सोमबार दिउसो २ः३० बजेतिर उत्तरतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा बालिका गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। **समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***